Nagu saabsan - Nanjing Liming Bio-products Co., Ltd.
Nanjing Liming Bio-Products Co., Ltd. oo la aasaasay 2001, shirkadeenu waxay ku takhasustay horumarinta, soo saarista iyo suuqgeynta tijaabooyinka degdega ah ee cudurada faafa gaar ahaan STDs. Marka laga soo tago ISO13485, ku dhowaad dhammaan wax soo saarkeenu waa CE calaamadeysan oo CFDA la ansixiyay. Alaabooyinkayagu waxay muujiyeen waxqabad la mid ah marka loo eego habab kale (oo ay ku jiraan PCR ama dhaqan) kuwaas oo waqti badan qaata oo qaali ah. Isticmaalidda tijaabooyinkayaga degdegga ah, bukaan socod eegtada ama xirfadlayaasha daryeelka caafimaad ayaa badbaadin kara waqti badan oo sugitaanka maxaa yeelay waxay u baahan tahay 10 daqiiqo oo keliya.
Waxaan ahmiyad gaar ah siineynay howlaha hubinta tayada iyo adeecida xeerarka hadda jira ee qalabka caafimaadka ee wax soo saarka, xakamaynta tayada, keydinta, gaadiidka iyo taageerooyin farsamo, samaynta alaab tayo sare leh si ay ugu adeegaan macaamiisheenna dhammaan adduunka.
Iyadoo ay weheliso faafitaanka faafa ee caalamiga ah ee COVID-19, wadamada adduunka oo dhan waxay la halgamayeen inay ogaadaan oo ay xakameeyaan cudurkan waqtiga. Waxaan soo saarnay tijaabooyin ku saabsan serological iyo xasaasiyad gaar ah oo gaar ah iyo tijaabooyin molecular ah oo loogu talagalay baaritaanka COIVD-19.
Hadafkeenu waa inaan noqono bixiye xalka oo dhan alaabada POCT waana raadineynaa hore u sii wadida inaan kula shaqeeyo si aad sawir qurux badan ugu sameysid caafimaadka aadanaha.
Jadwalka Wax soo saarka
Shirkadda ayaa la aasaasay waxayna noqotay qeybiyaha Bio Merieux iyo Alere
Ubadal cilmi baaris madaxbanaan, horumarin iyo soosaarida IVD, oo hel shahaadooyinka diiwaangelinta 6 fasal III, Shahaadada Diiwaangelinta fasalka 1aad iyo 5 shahaadada diiwaangelinta heerka 5 ah oo ay soo saartay Maamulka Cuntada iyo Dawada
Dhismaha guusha ee barxadda teknolojiyadda ogaanshaha kelli
Si guul leh ayaa loo soo saaray xirmo tijaabo ah oo baaraya cudurka sambabka oo loo yaqaan 'coronavirus'
Noqo wada-hawlgabe waqti-dheer sahay ka ah hay'adaha UNICEF oo si deg-deg ah uga jawaabaya daacuunka isla markaana la saxiixday heshiis wadashaqeyn muddo-dheer shirkadeena
Coronavirus ee Tijaabada Covid-19, Qalabka Coronavirus Antigen Test, H. Pylori Ag Imtixaanka Degdega Ah Wuxuu Ogaadaa Antigen, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Tijaabada Degdega ah, Qalabka Imtixaanka Igm / Iggrapid, Novel Coronavirus Degdega ah Ket Test,